Mpanamboatra polymère anesthesia avo | China Anesthesia High Polymers Factory & mpamatsy
Efitra fandidiana, departemanta fandidiana ankapobeny, departemantan'ny neurosurgery, departemanta momba ny aretim-behivavy, sampana famokarana, departemantan'ny urolojia sns.
Silops tadivavarana (manokana)
Endri-javatra sy tombony azo amin'ny Retractor (Exclusive):
Ny gel silika ara-pahasalamana nohafarana dia ampiasaina, noho izany dia azo amboarina amin'ny taratra X. Ny maodely isan-karazany dia afaka mifanaraka amin'ny filàna isan-karazany; Manana habe samihafa amin'ny loko efatra izahay: manga, mavo, mena sy fotsy. Ka ireo sela voamarika dia azo fantarina mora sy haingana; Ny endrika elliptical fisaka endrika lava sy ny elastika avoakany dia afaka misoroka tsara ny fahasimban'ny tonon-taolana.
Catheter amin'ny urinà silikôlika
Sampan-draharahan'ny urology, departemanta fandidiana ankapobeny, departemantan'ny neurosurgery, departementan'ny gynecology, departemanta proctology, departemanta orthopedics, departemanta momba ny zaza, ICU, efitrano fandidiana, departemantan'ny vonjy taitra, sns.
Famaranana Suture Gresper
Ny fitaovana fanidiana fonosana suture dia manana famantarana manokana hampiasaina araka ny voalaza etsy ambony. Amin'izay toe-javatra izay. Ny dokotera mpandidy dia tsara atoro hevitra mba hampiasa fomba iray izay ny fomban'adiny sy ny fahendreny manokana no milaza fa tsara indrindra ho an'ny marary, mifanaraka amin'ny famantarana sy ny fanoherana voalaza etsy ambony. Ireto torolalana manaraka ireto dia atolotra ho an'ny fiasan'ny fanjaitra nanjaitra. dia tsy referansa teknikan'ny fanidiana trocar.